Maraykanka, 01 April 2017
Sabti 1 April 2017
Daacish iyo Al Qaacida oo Ku Mashquulsan Aaldo Qarxa
Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha Argagixisada ay tijaabo ku hayaan aalado qarxa oo lagu dhexqarin karo kamputerada Laptop-yada taasoo aaney arki karin qalabka wax baara ee garoomada diyaaradaha caalamiga ah.
Soomaalida iyo Qodobka 50-aad ee Midowga Yurub
Warbixintani waxay ka hadlaysaa sida uu noqonayo xaalka dadka Soomaalida ah ee haysta dhalashooyinka waddamada Yurub, kuwaas oo muddo deganaa dalka Britian, kaas oo hadda go'aansaday inuu M. Yurub ka baxo.
Ohio: Toogasho ka Dhacday Goob lagu Caweeyo
Tillerson: Waa Dhammaaday Dulqaadkii Korea-da Waqooyi
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Rex Tillerson ayaa mar kale adkeeyey baahida loo qabo hab cusub oo lagula tacaalo halista nuclear-ka Korea-da Waqooyi ee sii kordheysa, taasi oo ay ku jiraan tallaabooyin ka adag siyaasaddii madaxweyne Obama ee Istraatiijiyadda dulqaadka.
Israel oo Beenisay in Syria ay Diyaarad ka soo Riday
Syria ayaa sheegtay inay soo ridday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israel, islamarkaana ay gantaal ku dhufatay mid kale, hase yeeshee Israel waa beenisay.
Wareegtadii Labaad ee Trump oo la Horjoogsaday
Garsoore Federaali ah oo fadhigiisu yahay gobolka Hawaii ayaa si kmg ah u joojiyey wareegtadii labaad ee Madaxweyne D. Trump uu ka soo saaray arrimaha socdaalka ee 6 dal oo Muslim ah.
Rex Tillerson oo Booqanaya 3 Dal oo Asia
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta dalka Japan ka bilaabay booqasho saddex dal uu ka marayo, asaga oo isku dayaya inuu xulufada Mareykanka u xaqiijiyo habab looga hortagi karo halista nuclear iyo mid gantaalo ee ka imaneysa Korea-da Waqooyi.